That's so good, right?: Wedding Party (to be continued)
Wedding Party (to be continued)
ကျွန်မရှေ့မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်နေတဲ့ Sean ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထွားထွားကို ရှုမ၀တဲ့မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ ငေးစိုက်ကြည့် မိပါတယ်။ အပြစ်ကင်းတဲ့အရာရာမှာ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အားကိုးစဖွယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသာ အိမ်ဦးနတ် ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မဆန္ဒ။
ဒါပေမဲ့လည်း အချစ်ဆိုတာထူးဆန်းသား၊ သူဟာဘယ်လို ယောက်ျားမျိုးဆိုတာ သိနားလည်းနေပေမဲ့ သူ့မျက်ဝန်း ကိုဆိုက်ကြည့်ရင်း ၀မ်းသာမျက်ရည်တွေဝဲလာမိတဲ့အထိခံစားမိနေတဲ့ ကျွန်မရယ်ပါ။ ပန်းသွေးရောင်ညာဘက်ပါးမို့မို့မှာ ရေစီးကြောင်းငယ် အစပြုလာပါရော။ ၀မ်းသာတဲ့ ကျမျက်ရည်ပေါ့လေ။မကြာခင် သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာမို့လား။
ရွှေညိုရောင် ဆံနွယ်ခွေ၊မျက်ဝန်းတညို့၊ ကြွက်သားများနဲ့တောင့်တင်းတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကျွန်မအတွက်အပြင်းစား ဆွဲဆောင်မှုတွေဖြစ်နေသလို မှဲ့ခြောက်ကင်းတဲ့အသားအရေ၊ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အပြည့်အစုံရှိတဲ့ ကျွန်မအလှကနေ သူမရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးထင်ပါ့။
"Yes" သူပြောတာဆိုရင် ဘယ်တုန်းကမှ မငြင်းဆိုပါ။ သူ့အပြုံးချိုချို နူးညံ့တဲ့လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ သန်မာတဲ့ လက်မောင်းကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူ့အညုခရာမှာ ကျွန်မကိုယ်ခန္ဓာဟာ အလိုက်သင့်မျောပါရပြီပေါ့လေ။ နူးညံ့သလိုစွဲမက်ဖွယ်အနမ်းလေးတွေ၊ ပြီးတော့ သူ့လက်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းကျွန်မရွှေရင်အစုံကို ဖုံးအုပ်ထားရာ Bra....ဆီ။
Sean ဟာ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ အနေအေးသူတစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်မသိပါရဲ့။ မင်္ဂလာပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်တော်တော်များများကိုလည်း ကျွန်မပဲစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရ တာသာ ကြည့်တော့။ အခုလည်းသူ့ဆီကခွင့်ပြုချက်လေး တစ်ခုရချင်နေတာ။ Sean ထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာဘေးကိုအသာ ၀င်ထိုင်လိုက်ရင်း အသာတကြည်စကားဆိုရတာပေါ့။ "Honey, I haveawedding question."
သူလေ အလိုက်တသိ တီဗီကိုပိတ်လိုက်ရင်း ကျွန်မဘက်ကိုလှည့်ထိုင်ကာ ပြောတဲ့စကားကို အာရုံစိုက် နားထောင် ပေးပါရဲ့။ " Adam အကြောင်းပြောမလို့ပါကို။ သူဟာဟိုးငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက အခုချိန်အထိ ကျွန်မရဲ့ မခွဲမခွာနေခဲ့တာရှင့်။ ငယ်ငယ်ကလေးတုန်းက အဖေဟာ အရက်ကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ် ဒါတွေ ကြောင့် ဒေါသကလည်းကြီး ကျွန်မတို့ကိုအော်ငေါက် သူ့ဒေါသအတွက် ထွက်ပေါက်ဟာ ကျွန်မတို့ မောင်နှမ ပါပဲ။ Adam ကိုဆူပူကြိမ်းမောင်းလိုက်ရင်လေ သူ့ခမျာနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကတော့ သူ့အခန်းထဲမှာ ငိုရှိုက် နေခြင်းပေါ့။ သနားစရာမောင်လေးကို ကျွန်မပဲချော့မော့နှစ်သိမ့်ခဲ့ရတာ။ အမေကလည်းကြောက်လန့်နေရုံ ကလွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ အခုအချိန်မှာတော့ အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မောင်နှမအချင်းချင်းပိုစည်းလုံးလာရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့...။"
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းတွေကို အရင်ကလည်းကြားဖူးပြီးသားပါ။ Lauren ဟာ အားလုံးအပြစ်မဆိုသာပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုစကားရှည်တာ သူမရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပါပဲ။ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုခု သူမကိုလိုက် လျောဖို့ မပြောခင်မှာဒီစကားတွေကို ဆိုနေကျပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဆိုတာသေချာမသိသေးတော့လည်း စိတ်လှုပ် ရှားမိတာအမှန်ပါပဲ။ မင်္ဂလာအ၀တ်အစားကို အရောင်းပြောင်းဝတ်ဖို့ပြောချင်တာများလို့လား။ သူမပြောဆိုတာ ကို ငြင်းဆိုတာခံရမှာ ကြောက်လို့ဖြစ်မှာပါပဲလေ။ ကျွန်တော် Lauren ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ အသင့်ပြင်နေရ ချိန်ဟှာSnicker commercials တစ်ခုလိုပါပဲ။ "Gonna be here forawhile?"
အင်း.....သူမအသက်ရှူနေတာကို အသာရပ် လှုပ်ရှားမှုတွေ အသာငြိမ်ရင်း ပါးစပ်ပြင်လိုက်ပုံက မေးမဲ့မေးခွန်းရောက်တော့ မယ်ထင်ပါရဲ့။ သူပြောတဲ့စကားတွေကြားမှပဲ ကျွန်တော့် daydreaming ကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။"Adam သာကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ အတူရှိနေခဲ့ရင် ကျွန်မအတော်ပျော်မိမှာပါ။" "What?" သူမဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်း ကျွန်တော်တကယ်သဘောမပေါက်ဘူး။ အမ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပွဲမှာ မောင်ဖြစ်သူကရှိနေမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။
"ကျွန်မဆိုလိုတာက မင်္ဂလာပွဲမှာ လူပျိုရံ၊ အပျိုရံတွေထည့်မယ်လို့စဉ်းစားစီစဉ်ပြီးသားမဟုတ်လား။ အနည်းဆုံး လူပျိုရံ သုံးယောက်ထည့်မယ်ဆိုရင် ရှင့်မှာက Mark နဲ့ Eric ရယ်ရှိပြီးသားလေ။သူတို့က ရှင့်အရင်းအနီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့။ တတိယတစ်ယောက်ကိုတော့ Adam နဲ့သင့်တောမယ်ထင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သူ့ကိုထည့်ပေးနော်။ ကျွန်မမှာ မောင်တစ်ယောက်ပဲရှိတာလေ...တကယ်လို့ ရှင့်မှာညီမရှိလို့ အပျိုရံအဖြစ် ထည့်ချင်ခဲ့ရင် ကျွန်မအနေနဲ့လည်း နားလည်ပေးမှာပါ။"
ကျွန်တော့်လက်ကိုအသာဆွဲကိုင်လိုက်ရင်း အပြုံးနုနုနဲ့ပြောဆိုပုံလေးက တစ်ခုခုပြန်ပြောဖို့ပြင်နေတဲ့ ကျွန်တော့် နှုတ်ကို ဆွံ့အသွားစေနိုင်တယ်ဗျ။ "ဒါပေမဲ့ကွာ မင်းတို့မောင်နှမ အရမ်း closely ဖြစ်မှန်းသိပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲ မှာ လူပျိုရံလုပ်မှာဆိုတော့ သူ bachelor party မှာလည်း တတွဲတွဲပါနေမှာပေါ့။" "Yes, ကျွန်မသူ့ကို လက်ခံ ပေးစေချင်တယ်။ရှင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ မကြာခင်မှာ ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တော့မှာမလား။ ရှင့်ညီအကြောင်း ပိုမသိချင်ဘူးလား။ မရင်းနီးချင်ဖူးလား..ကဲ။"
ကျွန်တော် သက်ပြင်းအခါခါ ချမိပါရော။ ဘာကြောင့် အမြဲရှုံးနေပါလိမ့်။အမြဲအလျော့ပေးဖြစ်နေတော့တာ သူမအတွက်ဆို။ "Come on Lauren, သူ့အသက် ၂၁နှစ်မပြည့်သေးဘူးကွ။ငါတို့ လူပျိုညပါတီမှာ သူနွှဲလို့ ဖြစ်ပါ့မလား။" "ရှင်ပဲ ကျွန်မကို မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ ကတိပေးထားတယ်လေ။ ရှင်တို့ Mark ရဲ့ cabin ထဲမှာသောက်ကြစားကြ ဘာပဲလုပ်လုပ်..." ပြောရင်း မျက်ဝန်းမှာ မယုံသင်္ကာအရိပ်အယောင်ရှိမရှိ တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ရင်း..."You know Adam" " He's cool, ရှင်တို့ ထဲမှာဘာလုပ်လုပ် သူမြင်သမျှ အိတ်သွန်ဖာ မှောက် ကျွန်မကိုပြန်ပြောတတ်မဲ့ type မျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ယုံ။" "Right." သူမအမှန်တွေပြောနေမှန်း လည်းသိတယ်။ သူ့မောင်ကို လူရာဝင်စေချင်တာလည်း ရိပ်မိတယ်ြ့ပီးတော့ ကောင်လေးရဲ့ ချစ်စဖွယ် ကိုယ်လုံးလေးကိုလည်း...ဟီး...ဟီး။
သူမတောင်းဆိုတာ ပြေလည်သွားချိန်မတော့ အိအိထွေးထွေးကိုယ်လုံးလေးဟာ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ စွေ့ကနဲ။ ငြင်ငြင်သာသာ အနမ်းလေးတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းဖျားက "Why not."
Gym ရဲ့ Locker room ထဲမှာ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ Sean ၊သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mark နဲ့ Eric လူပျိုရံကိစ္စ၊ bachelor party အကြောင်းပြောဖြစ်ကြသေးတယ်။ အဓိကက Mark ကိုခွင့်တောင်းအသိပေးချင်တာလည်းပါ တာပေါ့။
"ဟုတ်တယ်ကွ၊ တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ကောင်လေးပဲ။"
"Who cares," Eric added.
"အရေးမပါပါ ဒို့အတွက်" Eric ကတော့ပြောပြန်သေးရဲ့။
"Huh?" "အဲဒီတော့ မင်းယောက်ဖလောင်းလေးက ညပါတီအတွက် အဆင်ပြေပါ့မလား၊ Strip Club ကိုသွားဖို့ဆိုရင်တောင် အသက်၂၁ပြည့်မှနော်။"
"ဒါမှမဟုတ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် အရက်သောက်လို့ရမယ့်နေရာရှိလည်းပြော။"
"ငါတွေးထားတာကတော့ Mark ရဲ့ Cabin ကအသင့်တော်ဆုံးပဲ။"
"My cabin? ရုံးပိတ်ရက်တွေ၊ အားလပ်ရက်တွေမှာ ငါ့ cabin ကိုသွားလို့ရတာပဲဟ အခုဟာက မင်းအတွက် အထူးသီးသန့်လေ။"
"အဲဒါပဲငါပြောချင်တာ အပြင်မှာ ကဲမယ်ဆိုရင် Lauren သိသွားနိုင်တယ်လေ။ မင်း Cabin မှာဆို ဘီယာပဲ သောက်သောက် ဘာလုပ်လုပ် လွတ်လပ်တယ်လေ။"
"Sean ပြောတာမှန်တယ်ကွ ။ ငါဆိုလိုတာက Adam's cool ဆိုလည်း ငါတို့ Stripper တစ်ယောက်လောက် ငှားဖို့လိုဦးမှာပဲ။ မင်း Cabin က dirty club တစ်ခုထက်တော့ ပိုသင့်တော်မှာပါ။"
သဘောတော့ကျစရာအကောင်းသား ဒီအုပ်စုမှာ Mark အမြဲတမ်းရွှတ်နောက်နောက်ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး တော့ the mediator လိုဖြစ်နေတဲ့ Eric စကားပဲနားထောင်ဖြစ်တာ။ Eric ကရုရှလူမျိုး၊သူက ကျွန်တော်နဲ့ Mark ထက်ပိုထွားတယ်။နှစ်ဦးလုံးဟာ သူ့ဟာနဲ့သူတော်ကြပါ တယ်။ အချင်းချင်းပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီး အမှန်တကယ် နားလည်သူရဲ့ စကားကို လက်ခံနိုင်တယ်ဆို သဘောတူလိုက်ကြ တာပါပဲနောက်ဆုံး။
"Hey, Stripper တစ်ယောက်ကိုခေါ်ရင် မင်းကောင် Adam က squeal လုပ်မလား? ။"
"Nope, ဒီကောင်လေးက ငလောင်လေးကွ။ သူ stripper တွေကိုတွေ့ဖူးနေကြဆိုတာ ငါပြောရဲတယ်။ ဒီကောင် ကောလိပ်တက်နေပြီဆိုတော့ လေ။"
Mark သူ့တဘက်၊အိတ်တွေ Gym ရဲ့ Locker ထဲထည့်သော့ခတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပုံက သွားဖို့အသင့်ပေါ့လေ။
"ငါတို့ကောင်တွေလည်း ကောလိပ်တက်တုန်းက မဟုတ်တာအကုန်လုပ်ဖြစ်ကြတာအမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့နော် မင်းရဲ့ bachelor party က babysitting အဆင့်ဖြစ်သွားဦးမယ်။"
တောင်ခါးပန်းတစ်လျှောက်ကားကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းသာမောင်းလာတဲ့ Sean ရဲ့ကားပေါ် ကျွန်တော်ဘေးက အငြိမ့်သားလိုက်လာတာဗျ။ အစ်မနဲ့ သူမင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို့သားအရံလုပ်ရတယ် ပြီးတော့ လူပျိုညပါတီ ကိုလည်း ၀င်နွှဲနိုင်တော့မယ်လေ။ အခုလည်း မင်္ဂလာပွဲနွှဲပြီးတော့ Mark ရဲ့ဒေသဆီကိုရွေ့ နေကြတာ။ တအိအိ နဲ့ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ရေဒီယိုကိုပိတ်ပြီး Sean ကို " Hey, thanks for inviting me. I 'm sure Mark wasn't happy." လို့ပြောလိုက်တော့ ပြုံးရုံပဲပြုံးပြီးကားဆက်မောင်းလေရဲ့။ ဒီလူကြီးတော်တော်အေးတာ။ အစ်မနဲ့တော့ အံကိုက်ပဲ တစ်ယောက်ကပြော တစ်ယောက်ကနားထောင်လေ။ သူ့သူငယ်ချင်း Mark ကတော့ တော်တော် Hot တာပဲဗျ။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ စော်တွေ ငိုက်ချင်စရာ စတိုင်လ်နဲ့။ Eric ကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်း သန်မာ တဲ့ငနဲကြီးပဲ။ ဒီဘဲတွေကို ခဏလေးပဲမြင်ဘူးသေးတာ၊ ခင်စရာတော့အကောင်းသားပဲ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တွေလို မဟုတ်ဘဲ သူတို့လည်း တစ်မျိုးတော့ကဲကြသား။ "So, ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်မိတယ်။ What's on the agenda for tonight?"
Sean အဖြေကြားရတော့ ရင်တောင်အခုန်သား။ "Beer andastripper." တဲ့လေ။ ဟူး......ဒီည အတော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့။
ခပ်ဝဲ၀ဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ အနက်ရောင်ဆံနွယ်အရှည်၊ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေတဲ့ မြင်ရုံနဲ့ရင်ဖိုစေတဲ့ လယ်သာကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံ၊ နှုတ်ခမ်းနီထွေးထွေး တစ်စုံနဲ့အတူ စည်းချက်ကျကျ သူမ အခန်းထဲကို ၀င်ရောက် လာတယ်။ Candy တစ်လုံးလို ချိုမြမှုပေးမယ့် Candy ဆိုတဲ့ Stripper မိန်းမလှဟာ အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ယောက်ျားသားလေးယောက်ဝန်းကျင်မှာ တီးလုံးသံနဲ့အတူ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရှားကွေ့ ကောက်နေတာ.... ...အိုး........ဘောင်းဘီထဲက ညီဘွားအတင်းခေါင်းထောင် ထလာပါရော။ ကကွက်တွေ လှုပ်ရှားမြန်ဆန်မှု နဲ့အတူ တစ်နာရီနီးပါးရှိလာပြီးနောက် Candy က"You တို့က တွေ့ဖူးသမျှတွေထဲမှာ တော်တော်အလိုက်သိတဲ့ customerတွေပဲ။"တဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုလျှာနဲ့အသာသပ်လိုက်ရင်း Candy ကပြောတော့ Mark က "So you could give us an encore?" လို့မေးပြီး သွေးတိုးစမ်းလေရဲ့။ တင်ပါးတွေကိုခပ်ဆတ်ဆတ် လှုပ်ရမ်းလို့ Mark နဲ့ Eric ကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချ လိုက်တယ်။ သူတို့တွေရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို လက် တစ်ဖက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပေးရင်း ပေါ့။
Mark ကအရင်ဦးဆုံးအကောင်အထည်ဖော်သူပါပဲ။ ဘောင်းဘီပချုပ်က အဖုံးကိုဖွင့် အတွင်းကအတင်းရုန်းကန် နေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြွေဟောက်ကိုထွက်ခွင့်ပေးလိုက်တာ ငေါက်ကနဲခေါင်းပြူထွက်လာရော။ Eric ကလည်းအားကျ မခံ စက္ကန့်မခြား လိုက်လုပ်လိုက်တာ Candy ခမျာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မာထောင်နေတဲ့ မြွေနှစ်ကောင်ကို မကြောက်မလန့် တစ်ပြိုင်နက် ဟန်မူပိုပို လက်နဲ့သပ်ပေးလေရဲ့။
ကျွန်တော်အံ့အား......အံ့အားသင့်သွားတာ၊ဘာမှကို စကားမဆိုမိဘူး။ ယောက်ဖရဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပစ္စည်းတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသလို Candy အစွမ်းကိုရိပ်မိစပြုလာတာပေါ့။ Mark ဟာကရှည်တယ် ကြီးတယ် ဒါပေမဲ့ Eric ဟာကြီးက ပိုကြီးပိုတုတ်တာ....အိုးဂေါ့ဒ်။
"So" Candy ကစကားစတယ်။ "Who all wants to be in this show?" Mark ကအစထောင်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှက်လန့်တကြားနဲ့ "I think it's only fair Sean gets the show....after all he is the one getting hitched."
"အိုကေ....ငါက အသင့်တော်ဆုံးလို့ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။"တဲ့ တချိန်လုံးငြိမ်နေတဲ့ Sean က Candy ရှိရာဆိုဖာဆီအသာလှမ်းရင်း ဆိုလေတော့တာ။ Candy ကလည်းရင်ဖွင့်ဆန့်တန်းထားတဲ့ Sean ရင်ခွင်ထဲ အသာခေါင်းငဲ့ဝင်လိုက်ရင်း နှစ်ဦးသားအနောက်ဖက်က အခန်းထဲပျောက်ကွယ်သွားကြလေရဲ့။
သူတို့ပျောက်သွားတာကို အံအားတသင့်ကြည့်ရင်း Mark နှင့် Eric ဆီမျက်နှာပြန်မူမိတော့ သူတို့မျက်နှာမှာ အထူးတဆန်း ဖြစ်ပုံမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ "သူ.....သူဟာ လက်ထပ်ပြီးသားလူတစ်ယောက်လေ" လို့ပြောလိုက် တာတောင် "Thanksalot." Eric ကသူ့ငပဲကို အသာကိုင်ရင်း ဘာကိုပြောမှန်းမသိ။ "မင်း....အားလုံးကို မြင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါ strip club တစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ချချင်တဲ့ လူနဲ့ဖိုက်ကြတာချည်းပဲ။ သူ့လူပျိုညမှာ ဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ....ကွ။" Mark ကအော်တယ်။ ဒီလူတွေနဲ့ စကားပြောချင်စိတ်တောင် မရှိတော့ပါဘူး။တစ်နေရာရာကို သွားမှာပါပဲ။
"Calm it down," Eric said softly. "ဒီမှာယောက်ျားလေးတွေပဲရှိတာ စော်ဆိုလို့တစ်ယောက်ပဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်သူနဲ့သွားချမလည်း။ ကျွန်တော်မပါဘူးနော် ဒီကိစ္စမှာ။" Mark ဆိုတဲ့လူကြီးကို သဘောမကျ ပါဘူး။ သူ့ကိုယ်သူဆရာကြီးလိုလိုနဲ့ လူကိုစိုက်ကြည့်နေတာ။
" အရင်က ဒီကိုမင်းအစ်မလည်းလာခဲ့တာပဲ။ သူပါလာရင် Sean အနေနဲ့ ငါတို့ကိုလည်းမလိုဘူး ဘယ် တစ်ယောက်ကိုမှလည်း လိုမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ကဘာလုပ်ပေးလို့ရမှာလည်း။ ငါတို့နှစ်ယောက်လည်း သူ့အာသာကို မဖြည့်ပေးချင်ဘူး, that would be gay."
"I think it's gay either way, " လို့ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကလွှတ်ကနဲထွက်သွားမိတော့ Mark က "Oh really?" တဲ့။ ဒီလူကိုကြည့်မရချင်တော့ဘူး။ လန့်တောင်လန့်လာပြီ ကျွန်တော့်စကားကိုမယုံသလိုပဲ။ "မင်း ဘဲတွေနဲ့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူးပေါ့။" ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ....အခုများ ထရိုက်မလားမသိဘူးကြည့်နေပုံတွေက။ "အိုကေ....လုပ်ဖူးတယ် ဒါပေမယ့်ထပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။" ဒီစကားကြားတော့ Mark ထရပ်ရင်း ကျွန်တော့် ဆီလှမ်းလာတာ သူ့ငပဲကတရမ်းရမ်းနဲ့။ ကျွန်တော်ထပြီး တခြားသွားဖို့ပြင်ပေမဲ့ မရတော့ပါဘူး။ သန်မာတဲ့ လက်တွေနဲ့ကျွန်တော့်ပုခုံးကိုတွန်းပြီး ထိုင်ခိုင်းတော့တာ။ သူ့ငပဲကလည်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့တန်းနေ တော့တာပဲ။
"Suck it or I'll make you sucks it," Mark ကအမိန့်ပေးသလိုနဲ့ ပါးစပ်နားတေ့ပေးလာတော့ သူ့ညီဘွားကို ပါးစပ်ထဲ ရှလွတ်ဆိုပြီးမြည်အောင်ဆွဲစုပ်လိုက်တာ ။ "Oh fuck!" Mark moaned. သူကျွန်တော့်ကို အံ့အားသင့် သွားတယ်ထင်ရဲ့။ တစ်ယောက်သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ မာထောင်နေတဲ့ လီးကိုငုံလိုက်၊ ခေါင်းကို သွင်သွင်လှုပ်ရှား လိုက် ပြုစုပေးနေတာကို Eric တချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေရင်း မနေနိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ ဘောင်းဘီထဲတစ်ဝက် တပျက်ထွက်နေတဲ့ သူ့ငထွားကို ကိုင်ရင်း Mark ရဲ့ဘေးမှာလာရပ်တယ်လေ။ သူ့ဟာက Mark နဲ့အရှည်တူပေမဲ့ ပိုတုတ်နေတယ်။ Eric ဟာကို စုပ်ဖို့ပါးစပ်ကိုအတင်းဖြဲရတာများ အာကိုငြောင်းရော။ Eric ရဲ့လက်တွေက အငြိမ်မနေဘူး ကျွန်တော့တင်သားတွေ ပြီးတော့ညီဘွားကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်စပြုလာတယ်။ လီးနှစ်ချောင်း ငုံစုပ်နေရာက ပါးစပ်ကို ဖယ်လိုက်ရင်း"Don't rub my dick ...like I'mafag.....this stuff doesn't get me hard."
Eric သူ့လက်ကိုအမြန်ပြန်ဖယ်လိုက်ပြီး Mark ကိုအရိပ်အကဲကြည့်တဲ့သဘောနဲ့မျက်လုံး လှန်ကြည့်လိုက် တယ်။ Mark ကလည်းသူ့ကို မေးခွန်းထုတ်တဲ့အကြည့်နဲ့ တုန့်ပြန်ရင်း "Suck it." သူတို့ဒစ်နှစ်ခုကို ပူးကိုင် ပြီးပြုစုလိုက်တာပေါ့ ကျွန်တော်တတ်သမျှ အစွမ်းနဲ့။ သူတို့ခမျာ ခေါင်းတွေ တရမ်းရမ်းခါးတွေ အဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားရင်းပေါ့။ Mark နှင့် Eric နှစ်ဦးသားနှုတ်ခမ်းသားတွေ ငုံစုပ်ကြရင်း လျှာတွေကို အပြန်အလှန်လျှာဖွေ လား လျှာဖွေရဲ့။ ပြီးတော့ အ၀တ်တွေကို သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က တစ်လွှာခြင်း ဖြေးဖြေးချွတ်ကြတယ် သူတို့ ဒုံးကျည်တွေကို ကျွန်တော် sucking and jerking လုပ်ပေးနေစဉ်မှာ။ First - သူတို့ shoes တွေ၊ ခြေအိတ်တွေ၊ ပြီးတော့ shirts. နှစ်ဦးစလုံးဟာ သန်မာထွားကြိုင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပေမဲ့ Mark ကနည်းနည်းပိန် တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေကူးသမားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုထက်တော့ ပိုပါတယ်။ Next, ဘောင်းဘီရှည်တွေ boxer ဘောင်းဘီတိုတွေ ချွတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ warm mouth ဆီကို တရမ်းရမ်းနဲ့ပြန်လာကြလေရဲ့။
မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ Sean ရဲ့အိပ်ခန်းဆောင်ဆီက အသံတွေကြားရတယ်။ အဲဒီအသံတွေကို Mark စတင်သတိထားမိတယ်ထင်ပါရဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူအာရုံယူနေရင်းလေ။ အသံက သိသိသာသာ ကျယ်လာတာကိုး။ Sean တစ်ယောက် stripper ကိုပွဲကြမ်းနေပြီလေ။ Mark ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ငုံ့ကြည့်ရင်း "He's getting pussy. That means I better be getting at least man-pussy."
i love your story, pls submit more story like this.. do u have any bdsm, fetish or forced sex stories?? hope to read it soon, thanks
LAN Yu တရုတ်ကားက ပိုကောင်းတယ်ထင်တယ်
အခမဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဖင်လိုးပေးသည်။
NO Regret (Part I)
Wedding party (ending)